Dadkani Miyaanay Afka U Dhalan?! | Ramaas News
Dadkani Miyaanay Afka U Dhalan?! Qalinkii: Ibraahin Yuusuf Axmed ”Hawd”.
Ugu yaraan laba jeer baan akhriyay qoraaga la yidhaahdo Maxamed Baashe X Xasan oo ka hadlaya dhibaatada dadkeenna ka haysata higgaadinta habboon ee afka. Gaar ahaan Maxamed waxa uu soo qaaday codadkaa kor ku xusan oo ay dad badan oo af soomaaliga wax ku qoraa xilkeeda ka soo bixi kari waayeen. Aniguna in aan canaantaa xoojiyo waxaa igu kellifaya ta isagaba ku kelliftay oo ah sida joogtada ah ee ay ceebtaasi qoraallada ugu baahsan tahay. Run ahaantii mararka qaarkood waxa aad iswayddiinaysaa ’dadkii miyay carrab beeleen?’.
Dhaliishani haddii ay ahaan lahayd mid ku kooban qofaf iyo meelo gaar ah waxaa la la miciinsan lahaa, sida Maxamed yeelay, in aqoon loo kordhiyo oo la garansiiyo xarfaha labalaabmaa kuwa ay yihiin iyo waxa lagu ogaan karo goorta ay sidaa noqonayaan. Hayeeshee kolka aad qoraallada af soomaaliga ah dhex marto, waxaa kuu soo baxaysa sideedaba in ay aad u yar tahay inta qof ee xeerkaa ilaalin kartaa. Taa macnaheedu waxaa weeye, arrintu wax qoraallo yar yar oo kuwan oo kale ah lagu hagaajin karo waa ay ka weyn tahay. Waxaa la malayn karaa in ay tahay arrin u baahan in laga soo bilaabo dugsiyada af soomaaliga lagu dhigto. Haddana waxaa la iswayddiin karaa, dadka af soomaaliga wax ku qora badankooda ama idilkoodba kol haddii ay dugsiyo soo dhigteen, ma barayaashoodii baa sidaa u liitay, mise arrinta ayaa ah mid xal kale u baahan?
Af soomaaliga qoran wax badan baa qabyo ka ah, hawl weyn buuna u baahan yahay si uu u gaadho heer dhammaystiran oo sugnaanteeta la isla oggol yahay.Waana run oo maanta waxa uu marayaa marxalad isqaabayn ah. Sidii aan qoraal hore ku bandhigay kuwo dambena ku faahfaahin doono, dhaliilaha jiraa waxa ay u baahan yihiin in fikrado loo ururiyo si marka ay suurtowdo loogu gudbiyo fulin rasmi ah oo lagu midaysan yahay. Se labalaabidda codadka labalaabmaa shuqul ku ma leh arrintaa hore, waa se mid la xidhiidha sidii uu qofku erayga ugu qori lahaa isla sida uu ugu dhawaaqo, waayo badanaa cilladdani ku ma jirto ku hadlidda xarfaha adag, waa se ceeb la geliyo qorista. Sida kalena, xarfaha labalaabmaa ma aha wax aqoonbaadhis iyo barasho u baahan ee waa sida dabiiciga ah ee aynnu afkeenna ugu barbaarro uguna hadallo. Haddaba dadka sida wax u qorayaa afka miyaanay u dhalan oo ku barbarian?
Qalinkii: Ibraahin Yuusuf Axmed